I-fabric crepe - incazelo
Ngicabanga ukuthi ngamunye wethu uthanda ukubuka izithombe ku-albhamu endala. Futhi, ngokwemvelo, sibheka izingubo zikagogo nomama ebusheni bethu. Ngalezo zinsuku izingubo zaziqinile futhi zinekhwalithi ephezulu. Enye yezakhiwo ezifashisayo kwakuyi-crepe de Chine, okuyilolu suku, idume kakhulu futhi idumile.
I-fabric crepe - izici
I-Fabric "crepe" ingakhishwa ngezindlela eziningana, lapho izinhlobo ezahlukene zitholakala khona, njenge:
"Crepe de Chine";
Ekukhiqizeni "i-crepe", ukuguqulwa okuphindaphindiwe kwezinhlamvu kusetshenziselwa ngakwesobunxele nangakwesokudla, kuyilapho izintambo zingena phakathi kwezingxubevange, okufaka ekwakheni indwangu encane futhi ehlala njalo. Ukuthinta zonke izindwangu zomndeni "serfs" ziyingozi. Izintambo zokukhiqiza izinto zihluke kakhulu: zingaba ukotini kanye noboya, nosilika, ngisho nemicu yokufakelwa. Ukwakhiwa kwendwangu ethi "crepe" kufanele kuxoxwe ngumxhumanisi noma ubuke ilebula.
Kungakhathaliseki ukuthi i-cloth "crepe" iyancipha noma cha - lo mbuzo awuwaniki ukuphumula kwabesifazane abaningi kangaka. Ngenxa yokuthi izintambo zisontekile kakhulu, indwangu isinyene futhi i-inelastic.
Izakhiwo zendwangu yokugqoka
Inzuzo enkulu yalokhu okushiwo yilokuthi ingadliwa kalula futhi ayiqhubeki nhlobo. Indwangukazi omama nabakhulukazi abayithandayo ebusheni bayo, manje seyiyintandokazi phakathi kwabadwebi befestile nabathengisi.
Cishe zonke izinhlobo ze-crepe zisetshenziselwa ukuqoqwa kwazo hhayi nje kuphela njengezinto ezizimele ze-model, kodwa futhi nokuhlobisa imikhiqizo eyinkimbinkimbi.
Futhi uma ngaphambili le ndwangu igqokelwe ukugqoka kuphela nezigqoko zamadoda nabesifazane, khona-ke namuhla ukubonakala kwesicelo salesi sambatho kwande kakhulu. Okokuqala, yiqiniso, isetshenzisiwe, njengangaphambili, ukuze kusetshenziswe. Kodwa futhi "i-crepe" ayitholakali kangako emafetheni amaningi e-textile lapho kukhonjiswa khona umbhede . Konke ngenxa yendawo yayo: isithambile, ukugqoka, ayidingi i-ironing. Ezinye izinhlobo ze "crepe" zisetshenziselwa kabanzi kwifenisha yefenisha ye-furniture upholstery ngenxa yokukhetha okukhulu kwemidwebo, ukwenza izinto kanye nokukwazi ukubuyisela umswakama nodaka.
Nakuba kungekho okumangalisayo lapha. Singasho - ukuthambekela kwemvelo. Abantu abaningi kakhulu bakhathele amafakes, ngifuna lokhu, yemvelo, yemvelo kukho konke, ngisho nasezingutsheni nasezindlini zangasese.
"Crepe" indaba enhle. Kuyinto ejabulisayo kulokhu okuthinta, akuyikuchitha, ayilahlekelwa umbala uma ugeza, akudingeki ukuba u-ironed. Ikhwalithi ephakeme, ukuqina nokuqina kuyenza ingabe ingahle ibe khona.
Ukufaka isifuba sama-tubes ephephandaba
I-doll ye-Snowball - isigaba esiyinhloko
Iphethini "ibhakede" ngezinaliti
Ama-Poppies kusuka ubuhlalu - isigaba samakhono
I-albhamu yezithombe ze-Scrapbooking ngezandla zomuntu - isigaba somsebenzi
Indlela yokwenza iwebhu ngezandla zakho?
Isikhwama samaswidi - isigaba somsebenzi
Iminyaka yobudala yobuhlobo - indlela yokugubha?
Ngiyakwazi ukushisa ilanga nenyanga?
Isivimbelo sokusakaza ngaphandle kwe-rhinitis - izimbangela kanye nokwelapha
Isaladi "Olivier" nge isoseji - iresiphi zakudala nezindlela ezintsha zokwenza ukudla okulula
Izidakamizwa ezivimbela ukuvuvukala zamalungu
Amakhishi - amaphethini epulasitiki
Ukuthuthukiswa kwengane ngaphambi kwesikhathi
I-National School of Fine Arts
Ukukhipha okwesibhakabhaka kusuka kwesifazane
I-Sauce for cutlets
Ngabe i-heart rate ye-fetal ivela nini?
Izinto ze-Montessori ngezandla zabo
Yini ewusizo e-Rucola Salad?